FAQ - Shenzhen Saita Co., Ltd.
एन्ड्रोइड कार स्टेरियो
मित्सुबिशी को लागी
सुबारु को लागी
टोयोटा को लागी
निसान को लागी
होन्डा को लागी
Chevy को लागी
विशेष केबल संग
तपाईंको मूल्यहरू के हो?
हाम्रो मूल्यहरू आपूर्ति र अन्य बजार कारकहरूको आधारमा परिवर्तनको विषय हुन्। तपाईंको कम्पनीले थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गरेपछि हामी तपाईंलाई अपडेट गरिएको मूल्य सूची पठाउनेछौं।
के तपाइँसँग न्यूनतम अर्डर मात्रा छ?
हो, हामीलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरू चलिरहेको न्यूनतम अर्डर मात्रा चाहिन्छ। यदि तपाइँ पुन: बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर धेरै सानो मात्रामा, हामी तपाइँलाई हाम्रो वेबसाइट जाँच गर्न सिफारिस गर्दछौं
तपाईं सान्दर्भिक कागजात आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी विश्लेषण / अनुरूपता को प्रमाणपत्र सहित धेरै कागजात प्रदान गर्न सक्छौं; बीमा; उत्पत्ति, र अन्य निर्यात कागजातहरू आवश्यक भएमा।
औसत नेतृत्व समय के हो?
नमूनाहरूको लागि, नेतृत्व समय लगभग7दिन हो। ठूलो उत्पादनको लागि, नेतृत्व समय जम्मा भुक्तानी प्राप्त गरेपछि 20-30 दिन हो। नेतृत्व समयहरू प्रभावकारी हुन्छन् जब (1) हामीले तपाईंको निक्षेप प्राप्त गरेका छौं, र (2) हामीसँग तपाईंको उत्पादनहरूको लागि तपाईंको अन्तिम स्वीकृति छ। यदि हाम्रो नेतृत्व समयले तपाइँको समय सीमा संग काम गर्दैन भने, कृपया तपाइँको बिक्री संग तपाइँको आवश्यकताहरु मा जानुहोस्। सबै अवस्थामा हामी तपाईंको आवश्यकताहरू समायोजन गर्ने प्रयास गर्नेछौं। धेरै जसो अवस्थामा हामी त्यसो गर्न सक्षम छौं।
तपाईं कस्ता प्रकारका भुक्तानी विधिहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
तपाईंले हाम्रो बैंक खाता, वेस्टर्न युनियन वा PayPal मा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ:
अग्रिम ३०% निक्षेप, B/L को प्रतिलिपि विरुद्ध 70% ब्यालेन्स।
उत्पादन वारेन्टी के हो?
हामी हाम्रो सामग्री र कारीगरी वारेन्टी। हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो उत्पादनहरु संग आफ्नो सन्तुष्टि छ। वारेन्टीमा होस् वा होइन, सबैको सन्तुष्टिमा सबै ग्राहक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्ने हाम्रो कम्पनीको संस्कृति हो।
के तपाइँ उत्पादनहरूको सुरक्षित र सुरक्षित डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ?
हो, हामी सधैं उच्च गुणस्तर निर्यात प्याकेजिङ्ग प्रयोग गर्छौं। हामी खतरनाक सामानहरूको लागि विशेष खतरा प्याकिङ र तापमान संवेदनशील वस्तुहरूको लागि मान्य कोल्ड स्टोरेज सिपरहरू पनि प्रयोग गर्छौं। विशेषज्ञ प्याकेजिङ्ग र गैर-मानक प्याकिङ आवश्यकताहरू अतिरिक्त शुल्क लाग्न सक्छ।
ढुवानी शुल्कको बारेमा कसरी?
ढुवानी लागत तपाईले सामानहरू प्राप्त गर्न छनौट गर्ने तरिकामा निर्भर गर्दछ। एक्सप्रेस सामान्यतया सबैभन्दा छिटो तर सबैभन्दा महँगो तरिका हो। ठूला रकमहरूको लागि समुद्री ढुवानी उत्तम समाधान हो। ठ्याक्कै भाडा दरहरू हामीले रकम, तौल र बाटोको विवरणहरू थाहा पाएमा मात्र तपाईंलाई दिन सक्छौं। थप जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामीसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ?
हप्ताको7दिन बिहान 10:00 बजे देखि 6:00 बजे सम्म
SYGAV जीपीएस नेभिगेसन प्रणाली र अन्य कार अडियो र भिडियो उत्पादनहरू सहित भेहिकल मल्टि-मिडिया प्लेयरको उत्पादनमा विशेषज्ञता प्राप्त एक व्यापक नयाँ र उच्च प्रविधि कम्पनी हो।
© प्रतिलिपि अधिकार - २०१०-२०२१: सर्वाधिकार सुरक्षित।